२०७७ असोज १३, मंगलबार | eAdarsha.com
२०७७ असोज १३, मंगलबार
नवीन क्षेत्रको प्रवेशले उत्साह छाउनेछ । रोकिएका कारोबारले गति लिने छन् । लाभस्थानको चन्द्रमा प्रभावले चौतर्फी लाभको संकेत देखिन्छ । साथीसंगीको साथले कार्य बन्नेछन् । हर्षको खबर मिल्नेछ ।
नयाँ मित्र बनाइनेछ । मान्यजन एवं बन्धुवान्धवको साथ मिल्नेछ । समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । नयाँ कार्य योजना बनाएर अघि बढ्ने समय रहेको छ । उपहारादी मिल्ने योगसमेत देखिन्छ ।
धार्मिक कृत्यमा सहभागी भइनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार होला । पुराना समस्यालाई हल गरेर अघि बढ्न सकिनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो देखिन्छ । पढाइलेखाइमा मन आकर्षित हुनेछ । दिन सुधारोन्मुख रहनेछ ।
स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । अष्टमेश चन्द्रमाले आत्मविश्वासमा कमी ल्याउनेछ । आफ्नै निर्णय आफैलाई चित्त बुझ्ने छैन । दैनिक कार्यमासमेत परिश्रम बढी गर्नुपर्ला । पूर्व योजना बनाएर कार्य थाल्नुहोला ।
शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ । आर्थिक लगानीको वातावरण बन्नेछ । अपरिचित व्यक्तिको सहयोगले कार्य बन्नेछन् । श्रृङ्गारिक कार्यमा मन जानेछ । दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ रहला । हर्षको खबर मिल्नेछ ।
श्रमको उचित मूल्याङ्कन मिल्नेछ । परिश्रम ज्यादा गर्नु परेतापनि उचित प्रगतिफल मिल्दा चित्त बुझ्नेछ । व्यवसायबाट राम्रै लाभांश लिन सकिनेछ । अधिक व्यस्थताका कारण स्वास्थ्य भने कमजोर बन्नेछ ।
पारिवारिक सहयोग मिल्दा काम बन्नेछ । आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनेछ । बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि विकास हुनेछ । तनावदायी कार्यको अन्त्य हुनेछ । आफन्तजनसँगको सम्बन्धमासमेत सुधार भएर जानेछ ।
अध्ययनमा भन्दा वाहिरी विषयमा समय बित्नेछ । शारीरिक कमजोरीले गर्दा गर्दै गरेका काम कार्य छाड्नु पर्ला । आफ्ना लागि भन्दा अरुका काम व्यवहारमा खट्नु पर्नेछ । सजक रहेर कार्य गर्नुहोला ।
पराक्रम भाव बलियो रहेको छ । एकल प्रयासले नै धेरै कार्यहरु सम्पन्न गर्न सकिनेछ । घारायसी समस्याहरु हल भएर जानेछन् । शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति होला । मित्रमिलनको योग रहेको देखिन्छ ।
व्यवसायबाट उचित लाभांश उठाउन सकिनेछ । काम कार्यमा व्यस्थ रहँदा खानपानको तालमेल मिल्ने छैन । पूर्व योजना बनाएर अघि बढ्दा धेरै कार्यमा सफल भइनेछ । रचनात्मक कलाको विकास हुनेछ ।
वाक् कलाको वृद्धि विकास हुनेछ । अघिदेखि रोकिएका काम कार्यलाई सुचारु गरिनेछ भने नयाँ योजना रचिने छन् । नयाँ पदप्रतिष्ठा मिल्नेछ । नयाँ–नयाँ प्रस्तावहरु आउनेछन् । समय सुधारोन्मुख रहनेछ ।
लहैलहैमा लाग्दा खर्चभार बढ्ने र आर्थिक अभाव हुनेछ । असन्तोषी प्रवृत्तिले सताउनेछ । आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याले सताउने छ । अनावश्यक कार्यमा समय वित्नेछ । अग्रजको साथ सहयोगले कार्य गर्नुहोला ।
वि.सं. २०७७ साल असोज १३ गते मंगलवार, तदनुसार ई.सं. २०२० सेप्टेम्बर २९ तारिख, प्रमादीनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, शरदऋतु, चान्द्रमान अनुसार अधिक आश्विनशुक्लपक्षको त्रयोदशी तिथि वेलुका १०ः३२ बजेसम्म, त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ ।
नक्षत्र शतभिषा रात्रि १ः५५ बजेसम्म, त्यसपछि पूर्वभाद्रपदा रहनेछ ।
विष्कुंभादी योग शूल वेलुका ९ः४० बजेसम्म, त्यसपछि गण्ड रहनेछ ।
आनन्दादी योग मृत्यु ।
करण कौलव पूर्वान्ह १०ः०५ बजेसम्म, त्यसपछि गर रहनेछ ।
श्रीसूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा : कुम्भ राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ ।
सूर्योदय ५ः५६ बजे, सूर्यास्त : बेलुका ५ः५० बजे ।